Uyilo lobunjineli - iSuzhou Bricmaker yokuZenzekelayo Co., Ltd.
IINQAKU ELI-7-EZINGUNDOQO ZOKUYILA UBUNGCALI
Umgaqo webhotile, intloko enkulu kunye nomsila omncinci.
Ukuphepha iimeko ezithile zebhotile ezithintela umthamo wemveliso. Isiqinisekiso siyilelwe kwaye silindelwe kwimveliso kunye nobunjineli obugudileyo.
Kubandakanywa izinto ezingafunekiyo ezifumileyo, umasifundisane wokuvelisa, ukugqitywa kokufakwa kwezinto, iofisi kunye neendawo zokuhlala, ukukhanya kwendlela eluhlaza kunye nezinye izibonelelo.
Kuquka ukuveliswa kwezinto eziluhlaza (ukutyumza, ukuguga), ukwakha umzimba, inkqubo yeziko, ukothula izitena, ukupakisha, njl.
Ukhetho lwezixhobo ezincedisayo:
Ngokwetekhnoloji ukukhetha izixhobo zenkqubo ehambelanayo, iilensi, izixhobo zokusebenza, iinkqubo zolawulo zombane, umasifundisane, njl.
Izinto zokugcina ezingaxutywanga. Isityalo esityaliweyo, isitoreji esigugileyo, umgca wokukhuphela, Ugcino lwezitena oluhlaza. 6-ukomisa itonela kunye nokudubula okungu-3. Iimveliso ezenziwe ngombala.
Ukufumba kwesibini kwindawo yokubeka kunye nokothula itekhnoloji
Shale.Xinjiang Ukwakhiwa kwesiXeko. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu
Ukuveliswa kweemveliso zebhloko eziphosakeleyo ezikumgangatho ophezulu, inkampani inamandla, inentengiso elungileyo okanye izinto eziluhlaza ezinomxholo ophezulu wokufuma.
Ukubekwa kwindawo ezinamaleko ayi-7, igumbi lokumisa iitonela ezi-6, iimveliso ezigqityiweyo zokugcina
Ukuthungwa kwesibini kunye netekhnoloji encinci yokumisa inqwelo
Ukufuma okuphezulu kwezinto, qaphela ukuthathelwa ingqalelo kwezoqoqosho, le nkqubo ilungele inkampani encinci naphakathi, ngexesha elinye okanye ukufumba kokubini kungakhethwa zombini.
Ingqokelela eziziisekondari, ukuba ekubeni kwinani eliphezulu-ash impukane uthuthu, ingqokelela eziziisekondari kubhetele kunokuba ingqokelela elinye ixesha, ikakhulu ngokusebenzisa eyomileyo ikhowudi eziko ikhilogram blank ukuphakama, isivuno liyanda, iindleko zotyalo-mali liphezulu ngaphezu kwexesha elinye ingqokelela, mveliso intsimi iphakame kancinci kunexesha elinye.
Inkqubo yokufaka ixesha elinye
Izinto zokwenza imveliso (umgquba wamalahle, i-shale, njl. Njl.) Kunye nomxholo wokufuma okuncinci. Ukubeka ixesha elinye lula inkqubo yokuvelisa, ukunciphisa ukusebenza, ukuphucula iimeko zokusingqongileyo zabasebenzi, ukuphucula ukuveliswa kwabasebenzi, ukusetyenziswa kwemitshini kunye nokuzenzekelayo kulula, iindleko ezibanzi zingaphantsi kwenkqubo yokufumba yesibini.
3.Gxila kulungiso lwempahla eluhlaza kunye nonyango olufanayo
Ukucocwa kwemveliso eluhlaza
Kuxhomekeka kwimathiriyeli eyahlukeneyo kunye neemveliso zesintered, ubungakanani beemfuno zempahla eluhlaza zahlukile. Kodwa umgaqo ngokubanzi kukuba granularity elungileyo izinto ekrwada, izinto zeplastiki ekrwada iphezulu kakhulu, ukuziqhelanisa neemfuno imveliso ephezulu.
Cwenga izinto ezingafunekiyo zibhekisa kwizixhobo ezaphukileyo ezaphukileyo ngempembelelo yezixhobo ezikhulu, emva koko izinto ezingumgubo ezingafunekiyo zibuyise ukutya ngokukhawuleza kwesantya sezixhobo ezincinci zokugaya ezifana nevili lokusila, ikhetshi yegusasi, isityumzi sokuqengqeleka, njl.
Impahla efanayo ekrwada yonyango
Izinto ezingafaniyo ezingekho mgangathweni, ikakhulu ngamanzi azenzekelayo kunye nezixhobo zokulinganisa umbane ngokulinganayo, ukumilisela, ukuhambisa kugcino olugugileyo, ukwenza amasuntswana emithombo eluhlaza afumile, ukukhutshwa kunye nokwandisa uzinzo, ukuphucula izinto zokubumba, ukomisa iipropathi kunye nokusebenza kwebhaka, ukuphucula amandla emveliso kunye nomgangatho.
Isakhiwo se-4.Kiln, nikela ingqalelo kumgaqo weemveliso zokuntywila shushu
Ukuthengisa iimveliso zezitena ze-Tuxxing Tela ezinezitena ezibhityileyo, inkqubo ifuna ubushushu obuphantsi, ukomisa kancinci, ukuhamba komoya ngokulinganayo, ukubhaka ngokukhawuleza. Ke ukubhaka ezintathu kunye nenkqubo yokutsha enye, qinisekisa umgangatho kunye namandla.
Ukomisa iThanxing. 3-itonela yokomisa kunye ne-1-itonela yokutsha kwenkqubo
Indlela 5.Stacking, nikelani ingqalelo iimveliso sintered thermal umgaqo
Indlela yokufumba ibaluleke ngaphezu kokutsha
6. Isikali soqoqosho
Imigaqo kukuba amandla aphakamileyo, ukunciphisa iindleko, ukusebenza ngokulula.
7. Usizi, utyalo-mali kunye nokonga umbane
Izixhobo esizisebenzelayo, ingqokelela yeerobhothi, ukothula izitena, ukupakisha, iinkqubo zolawulo ezizenzekelayo.
Isuphamakethi yeBricMaker, i-turnkey, inkonzo enye.
Wonke umsebenzi wethu kukuqinisekisa ukuhamba kakuhle kwenkqubo yemveliso, ukuqinisekisa umgangatho, ukufezekisa uqoqosho lwesikali, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla, ukuphucula ukusebenza ngokukuko, kunye nokwenza lula ngakumbi kulawulo lomqhubi, ukuphucula umfanekiso wequmrhu.